Mushure - Iyo saga yemamuvhi ekuona paAmazon Prime | Bezzia
Susana godoy | 11/01/2022 14:00 | Nhau
Kana ivo vachiri kusanzwika kujaira kwauri, saka pamwe iwe uchawana nzvimbo yekunakidzwa neimwe yemasagas ari kupa zvakawanda kutaura nezvazvo. Yakadanwa kuti 'Mushure' uye inyaya yakavakirwa pane inoveli nemunyori Anna Todd. Hukama hwevechidiki, kuodzwa mwoyo kwekutanga, hushamwari nematambudziko emhuri ndezvimwe zvezvisarudzo zvinobatika munyaya yakadai.
Imwe neimwe bhaisikopo rakavakirwa pane rimwe remabhuku aTodd, kusvika parizvino tine mafirimu matatu eana anoapedzisa. Kana iwe uchida kuziva zvishoma nezve nyaya yakaita seiyi, iyo ine chokwadi chekukwezva iwe, saka haugone kupotsa zvese zvinotevera nekuti inokufarira iwe zvakanyanya. Wagadzirira here kana kuti wakazvigadzirira?
1 Mushure: Zvese zvinotangira pano
2 Mushure: Muchiuru chezvidimbu
3 Mushure: Mweya Yakarasika
Mushure: Zvese zvinotangira pano
Sezvatakakurukura, kusvika parizvino kune matatu mafirimu aunogona kuona paAmazon Prime. Yekutanga yakanzi 'After: Zvese zvinotanga pano'. Mariri tinoona kuti kudanana kwevadiki kune zvakawanda zvekutaura. Tichasangana naTessa Mudiki ari kubuda mumba make nekuti ari kutanga koreji. Achaita shamwari itsva, idzo kunyange zvazvo amai vake vasingadzifariri, iye haana basa nazvo. Zvingave zvishoma sei, mukomana anoonekawo muhupenyu hwake. Chokwadi, pazvinenge zvichiita sokuti kukwezva kwavabata vose, mumwe wechitatu anoedza kuvhura maziso ake nokumuudza kuti zvose zvakanga zvabva pamutambo wavakanga vaita humwe usiku. Chimwe chinhu changa chisiri chechokwadi, asi izvo zvinoita kuti Tessa achinje zvakanyanya. Kunyangwe iye naHardin vaine zvakawanda zvakafanana uye zvinoita sekunge vachiri nezvakawanda zvekugovana. Saka chikamu chekutanga chinotiratidza kuti vakasangana sei, hukama hwavo hwakabuda sei asiwo kuodzwa mwoyo kwekutanga nematambudziko emhuri.
Mushure: Muchiuru chezvidimbu
Pavanokura, nyaya itsva dzinochinjawo. Iye zvino Tessa anoronga kutarisa pazvidzidzo, nekuti ndizvo zvaari kunyatsoda uye zvaanoda. Anowanawo basa semudzidzi, saka mukana wakanaka weramangwana rake uye haadi chero chinhu chipi zvacho chingamukanganisa. Kunyangwe zvisiri nyore nguva dzose sezvatinoda. Nekuti pabasa rake, ane waanoshanda naye anomukwezvawo, sezvo achiziva kuti ndiyo vhezheni yaaizoda padivi pake uye kwete munhu akaita saHardin. Izvi zvinoratidzika kuratidza chiso chayo chakaipisisa zvakare uye ndezvekuti kana iwe watofunga kuti une mamwe matambudziko akakurirwa, anouya zvakare pamberi pako. Asi ichokwadi kuti haugoni kurwisa rudo, kana kuti zvimwe unogona? Iyo yechipiri firimu mune saga iyo iwe yaunogona zvakare kuona paAmazon Prime Uye kunyangwe isina kugamuchira ongororo yakanaka, zvinoita sekunge veruzhinji vaive neimwe pfungwa.
Mushure: Mweya Yakarasika
Takasvika bhaisikopo rechitatu, uye kusvika parizvino ndiyo yekupedzisira yatinayo kukwanisa paAmazon Prime. Sezvo iyi yakaburitswa muna 2021 uye isu tichafanirwa kumirira zvishoma kuti chikamu chechina chisvike. Parizvino, zvinoita sekunge hukama hwekugarisana pakati pevaviri ava huri kubva pakusimba kuenda pakusimba. Asi apo kwakaratidzika kuva kusimbaradza soukama hwavakuru, vabereki nemhuri yomumwe nomumwe wavo vanobatanidzwa. Saka ivo vachaona kuti pamwe vachave nemaonero akasiyana ehupenyu zvakare uye vanotombokahadzika manzwiro avo, nekuti pane zvakawanda zvakavanzika zvichaburitswa mufirimu rose. Asi zvinogara zviri nani kuti uzvionere wega nekuti ine nhoroondo yakawanda yekutenderedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Mushure: Iyo saga yemafirimu ekuona paAmazon Prime